Indlu yodwa - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTal
Masiyigcine yonke kwaye ilula :)
Ikhabhinethi yethu yahlukile eAmirim, ilali ezolileyo yemifuno ebukele iGalili ikwithambeka. Ifihlwe emahlathini kwaye ilungele abo bafuna ukuzola kunye nokuzimela ngaphandle apho.
Amantombazana kunye nabafana, Sonke kufuneka sibe nethuba lokuthoba isantya, ukuphinda siqhagamshele ngelizwi lethu langaphakathi, sitshintshe ii-vibrations zethu kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukuphefumla.
Yiloo nto ikhabhinethi ilapha.
Kunconywa kakhulu kwi-yogis, igcisa, ababhali, abacinga kunye nabafuna uxolo.
Le ndawo ikwicala lentaba, igqunywe lihlathi. Kukuhambo olu-1 lomzuzu ukusuka kwindawo yokubhaka yasekhaya ezele ngumculo kunye nempilo, kukho ivenkile encinci yegrosari eyi-5 min ukuhamba. Incopho yentaba yaseMitspe Hayamim kukuhamba ngemizuzu engama-35.
ngexesha lasehlotyeni, i-swimming pool yelali iyasebenza.
Kulungile ukukhumbula ukuba i-Amirim ikwimizuzu engama-25 ukusuka kulwandle lwaseGalili, i-45 min ukusuka elwandle, kwaye inokufikelelwa ngezithuthi zikawonke-wonke.
I-Amirim yilali ezolileyo, ezolileyo, enemifuno, emi ecaleni kwentaba. Inombono ogqwesileyo phezu kolwandle lwaseGalili, iintaba kunye neentlambo ezijikelezileyo kwaye ngeentsuku ezintle nakwiMeditera.
Ukusuka kwilali ngokwayo unokuthatha uhambo olumbalwa lokuhamba ngeentsuku ezimnandi, ukonwabele ijam yomculo ngamaxesha athile okanye ikonsathi, utye kwiindawo zokutyela zemifuno, iikhefi okanye umamele nje iintaka.
I-Michal ifumaneka ngefowuni kwaye idla ngokujikeleza. Ukuba ufuna nantoni na eqala kwitawuli eyongezelelweyo kwaye ukuya entliziyweni ukuya kwincoko yentliziyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Amirim